नेपालको तराई क्षेत्र सलहबाट उच्च जोखिममा - कस्तो किरा हो सलह? - Maxon Khabar
Home / Unlabelled / नेपालको तराई क्षेत्र सलहबाट उच्च जोखिममा - कस्तो किरा हो सलह?
नेपालको तराई क्षेत्र सलहबाट उच्च जोखिममा - कस्तो किरा हो सलह?
२०७७ जेठ १५ - काेराेना संकटकाे बेलामा नेपालमा फेरी अर्काे संकट थपिने सम्भावना बढेकाे छ । अफ्रिकाको केन्याबाट सुरु भएको लाखौंको समूहमा सलह किरा पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगेको छ। अहिले यो सहलको समूह भारतको मध्यप्रदेशमा प्रभाव जमाइरहेकाे छ। जहाँ कयौँ बस्तीका बाली सलहले सखाप पारिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तहल्का मच्चाइरहेकाे सलहको झुण्ड नेपालमा पनी आइपुग्ने अनुमान गरिएकोछ। यस अगाडी पाकिस्तानमा ठूलो मात्रामा बालीनाली नष्ट गरेर यसको समूह भारतमा प्रवेश गरेकाे बताइएकाे छ । पाकिस्तानमा ठुलाे मात्रामा बाली सखाप पारेपछी त्यहा राष्ट्रिय संकट समेत घाेषणा गरिएकाे थियाे ।
हाल याे किराले भारतकाे मध्यप्रदेशमा विध्वंश मच्चाइरहेको छ। मकै बालीमा लाग्ने फौजी किराबाट हैरान नेपाली कृषकमाथि सलह आउने खबरले अर्काे तनाब थपिने सम्भावना बढेकाे छ । सलह अमेरिकी फौजी किरा भन्दा घातक मानिन्छ किनकाी याे फट्याङ्‍ग्रो प्रजातिको सलहले क्षण भरमै कयौँ भुभागका बाली सखाप पार्ने क्षमता राख्दछ । विशेषगरी गर्मी ठाउँमा फैलन सक्ने याे किराबाट नेपालको तराई क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ । मरुभूमिको वातावरण र उच्च तापक्रममा मात्रै सलहकाे प्रकाेप उच्च रहने बताइन्छ । हाल सलहको सम्भावित संकटबाट कृषकलाई जोगाउन नेपाल सरकारले एउटा प्राविधिक समिति पनि बनाइसकेको छ। सलह हेर्दा फट्याड़ग्रो जस्तै भए पनि थोरै ठूलो र यसको पछाडिको खुट्टा लामो हुने गर्दछ। यसलाइ विश्‍वकै खतरनाक कीरा पनी मानिन्छ । यो कीराले समूहमा आक्रमण गर्छ। हावाको गतिमा यिनीहरु उड्ने गर्छन सलहको एक झुण्ड करिब १ वर्ग किलोमिटरको हुने गर्दछ भने यसमा करिब ८ करोड जति सलह हुन्छन्।
सलह २ हजार फिटमाथि जान सक्दैन। यिनीहरुले समूहमा आक्रमण गर्ने, एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जाने जस्ता सामूहिक काम गर्छन्। अरु कीराहरुले निश्‍चित समूहको बाली मात्रै खाने गर्दछन् भने यसले जुनसुकै जातको बाली खाने गर्दछन यी झुण्डले प्रत्येक दिन १० माइलको यात्रा तय गर्ने गर्दछन्। याे किराले १ घण्टामा ३ किलिमोटिर उडान भर्न सक्षमता राख्छन । नेपालका लागि यो किरा नयाँ होइन। सन् १९६२ मा पनि यसको चर्चा भइसकेको थियो। सलह भारतको राजस्थानमा २० वर्षअगाडि पहिलोपटक आउँदा पनि नेपालमा व्यापक असर गर्न सक्ने हल्ला चलेको विज्ञहरु बताउँछन्। जलवायु परिवतर्नको असरले यस किरालाई असर गरेकोले अफ्रिकादेखि दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा आइपुगेको कृषि किट विज्ञ डा. समुन्द्रलाल जोशी बताउँछन्। अफ्रिकाको गर्मी वातावरणबाट हुर्केर आएको हुनाले यसलाई सधैँ गर्मी मौसम जरुरी हुने गरेकोले उनले बताए।
त्यहीकारण नेपालको तराई क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतको उतर प्रदेशसम्म आएकोले नेपाल प्रबेश सम्भावना उच्च छ । याे किरा २० डिग्रीमुनिको तापक्रममा बाँच्‍न सक्दैन। यसका लागि भनेको ४० डिग्री सबैभन्दा उत्तम हो। त्यसैले नेपालको तराई क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राणीशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक प्रेमबहादुर बुढाका अनुसार सलहको समूहले अण्डाबाट निस्केपछि हरिया बोटबिरुवाका पातहरु सबै खाँदै जान्छ। देखेको र भेटेको जति सबै नष्ट गर्छ। मालाथिन नामको किटनाशक औषधि बालीमा छर्कन उनले सुझाव दिए। नेपालमा सलहविरुद्ध तीन प्रकारको हानीकारक औषधि मात्रै पाइने उनले जानकारी दिए। हावाको बहाव संगै मात्रै यो किरा हिँडन भएकाेले नेपाल प्रवेश गर्ने नगर्नेमा हावामा भर पर्ने उनको भनाइ छ।